सुनौलो संगम क्वाटरफाइनलमा – Khel Dainik
सुनौलो संगम क्वाटरफाइनलमा
बुटवल (खेलदैनिक) । सुनौलो संगम युवा क्लब जारी शुद्धोदन गाउँपालिका आठौं फर्साटिकर कप नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
आइतबार भएको प्रिक्वाटरफाइनल खेलतर्फ सुनौलो संगमले लिस्नु युवा क्लबलाई ३–० ले हराउँदै क्वाटरफाइनल यात्रा तय गर्यो । शुद्धोदन–४ बर्मेली टोल स्थित फर्साटिकर माविको खेलमैदानमा भएको खेलमा सुनौलो संगमका लागि मनिष थापा एक्लैले दुई गोल गरे ।
यद्यपि पहिलो गोल भने सुनौलो संगमले पेनाल्टीबाट गरेको थियो । पहिलो हाफतर्फ बल जोगाउने क्रममा लिस्नुका गोलरक्षकले विपक्षी खेलाडीलाई बक्स भित्र फल गरेपछि सुनौलो संगमले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो । जसलाई १७औं मिनटमा रन्जित थापाले गोलमा परिणत गरेका थिए ।
त्यस्तै थप दुई गोल भने दोस्रो हाफमा सम्भव भयो । सुनौलो संगमका लागि ५३ र ८१औं मिनटमा मनिष थापा एक्लैले दुई गोल गर्दै टोलीको प्रभावशाली जित सुनिश्चित गरेका थिए । खेलको म्यान अफ द म्याच भने सुनौलो संगम कै जिवन राई मगर घोषित भए ।
प्रतियोगिता अन्तरगत पुष १३ गते सोमबारको खेल पाल्पा–११ र नवयुवा खेलकुद तथा साँस्कृतिक परिवार, ठुटिपिपल बीच हुने खेल संयोजक टेकु भण्डारीले जानकारी दिए ।
फर्साटिकर युवा क्लब, शुद्धोदन–४ फर्साटिकरको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसहित नगद २ लाख हात पार्नेछ भने उपविजेताले १ लाख प्राप्त गर्ने संयोजक भण्डारीले बताए । प्रतियोगिताको फाइनल खेल आउँदो पुष २५ गतेका दिन हुनेछ ।
← खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने योजना ल्याउँछुः मन्त्री लामा बिमल र बिक्रमको कतारमा उपचार हुने →
आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने पुष १२, २०७७
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ? पुष १२, २०७७
नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली पुष १२, २०७७
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा पुष १२, २०७७
राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित पुष १२, २०७७
दावेदार मनाङ सेमिफाइनलमा पुष १२, २०७७